သင်္ဘောပန်ကာ၌ ကြိုးငြိနေသဖြင့်ရေငုပ်၍ဖယ်ရှားသူပြန်ပေါ်လာခြင်းမရှိဘဲ ပျောက်ဆုံးနေသဖြင့် ရှာဖွေလျက်ရှိ
၁၆.၄.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၀၅၃၀အချိန်တွင် ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ်၊ ဆိပ်ကြီး
အရှေ့ရပ်ကွက်၊ခနောင်တိုချောင်းအတွင်းရှိ “တနင်္သာရီ”လွန်းကျင်းတွင် လွန်ခဲ့သော(၁၅)ရက်ခန့်က ဒေါက်တင်ထား သည့် “ရတနာထွန်းအောင်” ကုန်တင်သင်္ဘောသည်လွန်းကျင်းမှရန်ကုန်သို့ထွက်ခွာစဉ်သင်္ဘောပန်ကာ၌
ကြိုးငြိနေသဖြင့်ရပ်ထားပြီး ပဲ့နင်းငယ်လုပ်သားဖြစ်သူ မောင်ထွန်းလှိုင်၊ (၂၈)နှစ်၊ (ဘ)ဦးစံသာအောင်၊ စစ်တွေမြို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်နေသူမှေ
ချောင်းအတွင်းရေငုပ်၍ ကြိုးအားဖယ်ရှားရာမှ ပြန်ပေါ်လာခြင်းမရှိဘဲ
ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းကို ပဲ့နင်းကြီးဖြစ်သူ ဦးရွှေဝင်းမှဆိပ်ကြီးခနောင်တို မြို့မရဲစခန်းသို့ လာရောက်အကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။
၎င်းပျောက်ဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့မရဲစခန်း လူပျောက်
အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၄) ဖြင့် ရေးဖွင့်ကာ ရှာဖွေလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
တောင်ကိုရီးယား အနောက်တောင်ကမ်းရိုးတန်းမှာ လူ ၄၇၀ ဦး တင်ဆောင်ထားတဲ့ ခရီးသည်တင်သင်္ဘော နစ်မြှုပ် ဓာတ်ပုံ မှတ်တမ်းများနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး မှတ်တမ်းများ
တောင်ကိုရီးယား အနောက်တောင်ကမ်းရိုးတန်းမှာ လူအယောက် ၄၇၀ ကျော်ကို တင်ဆောင်ထားတဲ့ ခရီးသည်တင်သင်္ဘော ၁ စီး ဧပြီ ၁၆ ရက် ဒီနေ့မှာ နစ်မြှုပ်သွားပြီး ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
စာဖတ်သူများအတွက် နှစ်သစ်လက်ဆောင် - ခန္ဓာသင်္ကြန်နှင့် အတွင်းသန့်ရှင်းရေး
ကူးပြောင်းတာကို ‘သင်္ကြန်’ ခေါ်တာ။‘သင်္ကန္တ’ ပေါ့။
လူကလည်း ရုပ်ဟောင်းတွေ ချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့ရုပ်သစ်ကို ကူးပြောင်းတာ တဲ့။
ရုပ်ဟောင်းကနေ ရုပ်သစ် ကူးပြောင်းတယ် ဆိုပေမယ့်ခု ဒီမှာကတော့ ကူးပြောင်းတယ်လို့ မဟုတ်ဘူးနော်။
အဟောင်းပျက်လို့ အသစ်ဆက်တာ။သူ့အကြောင်းနဲ့သူ မကင်းတာဘဲ ရှိတယ်။
♦ အဲဒီတော့ နှစ်သစ်ကူးရင် သန့်ရှင်းရမယ်နော်။သန့်ရှင်းအောင် လုပ်ရမယ်။
သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနဲ့ နှစ်သစ်ကူးရတယ်။ခေါင်းလျှော်ရ, အဝတ်လျှော်ရတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီ ချေးတွေ ညှော်တွေ သန့်ရှင်းသွားတာနဲ့ကျန်းမာရေးတော့ ရတာပေါ့လေ။
ထားပါတော့။ နည်းနည်းတော့ ရတာပေါ့။ဒါက လိုရင်းမဟုတ်ဘူးနဲ့ တူတယ်။
♦ ဒါက အပြင်သန့်ရှင်းရေး။
♦ အတွင်းသန့်ရှင်းရေးက လိုသေးတယ်။
♦နှစ်သစ်ပြောင်းတယ်ဆိုပြီး လူသစ်ဖြစ်အောင် ခေါင်းလျှော်ကြ အဝတ်လျှော်ကြ လုပ်ကြတယ် မဟုတ်လား။
♦စိတ်ကိုကော ဖြူစင်အောင် လျှော်ကြ ဖွပ်ကြရဲ့လား။
♦စိတ်သန့်ရှင်းဖို့က လူသန့်ရှင်းဖို့ထက် အရေးကြီးတယ်နော်။
ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကို အမြဲလျှော်ဖွပ်နေမှသန့်ရှင်း ဖြူစင်မယ်။
ကိလေသာဆိုတာ” လောဘ, ဒေါသ, မောဟ” တွေပဲ။
♦လောဘနဲ့ စားတယ်။ လောဘနဲ့ သွားတယ်။ လောဘနဲ့ နေတယ်။
♦ဒေါသမှာလည်း ဒီလိုပဲ။ ဒေါသဖြစ်ရင် ပူပန်ဆင်းရဲတာပဲ။
ဒေါသမဖြစ်အောင် စောင့်ထိန်းဖို့ဟာ ဒေါသဖြစ်ရင် ဖြစ်မှန်း သိရမှာပဲ။သွားတာ၊ လာတာ၊ စားတာ၊ သောက်တာ၊ နေတာ၊ထိုင်တာ အားလုံးမှာ “အသိနဲ့ သတိ” ကပ်ထားရမယ်။
အသိနဲ့ သတိ တစ်ထပ်တည်း ကျဖို့ လိုတယ်။လိုရင်းချုပ်လိုက်တော့ “သတိပဋ္ဌာန်”ပဲ။
♦ ခု သင်္ကြန်ကာလအတွင်း ဥပုသ်သီတင်း စောင့်သုံးကြတာ၊ကိုယ်တွေ နှုတ်တွေ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တာ၊
ကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာ ပွားများတာ“စိတ်သန့်ရှင်းဖို့၊အသိဉာဏ်သန့်ရှင်းဖို့ ” လုပ်ကြတာ။
♦ အဲဒီ သန့်ရှင်းရေးတွေ လုပ်ထားတဲ့လူကတော့
“အတွင်းရော ၊ အပြင်ရော” သန့်ရှင်းပြီး ကောင်းသောနှစ်သစ်ကူးခြင်းပေါ့။
ဒီပြင် လောဘ ဒေါသ မောဟတွေ ထူပြောနေတာတော့မကောင်းသော နှစ်သစ်ကူးခြင်း ဖြစ်မှာပေါ့။
ဘုန်းကြီးတို့ ပရိသတ်ကတော့ ကောင်းသောနှစ်သစ်ကူးခြင်းဖြစ်အောင် လုပ်ရမယ်။
ခန္ဓာသင်္ကြန်လည်း မကျသေးဘူး။ လုပ်ကြဦး။
ကုသိုလ်တွေ လက်မမြှောက်နဲ့အုံး။ဒီပုံစံအတိုင်းပဲ သင်္ကြန်ရက်မှာ လုပ်ကြသလို ဆက်လုပ်ကြဦး။
လုပ်ကြဦးဆိုတော့ ဒီပြင် မဟုတ်ပါဘူး။
♦ ငါးပါးသီလနဲ့ ကိုယ်လုပ်နေကြ “ကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာအလုပ်”ကို လုပ်ကြဦးလို့ ဆိုလိုတာပါ။
အဲဒီတော့ ခန္ဓာသင်္ကြန် ဘယ်တော့မှ တက်မလဲဆိုတာ တွက်ဦးမှ။
♦ ခန္ဓာသင်္ကြန်ကတော့ ခန္ဓာရှိနေသရွေ့ သင်္ကြန်ကျနေမှာပဲ။ ♦
သင်္ကြန်ဆိုတာ အသစ်အဟောင်း ပြောင်းလဲတာဆိုသဖြင့်ရုပ်နာမ်အသစ်တွေ အသစ်အသစ် ထပ်ဖြစ်နေတာ။မီးခိုးမဆုံး မိုးမဆုံးပဲ။
ဒီက အကြောင်းမကင်းသေးဘူး။အကျိုး ရုပ်နာမ်တွေ ထပ်ဖြစ်နေတာတဲ့။
မသိမှု အဝိဇ္ဇာနဲ့ တဏှာလောဘ အကြောင်းခံပြီးတော့
ဒုက္ခသစ္စာ ရုပ်နာမ် ခန္ဓာရ။”
ဒုက္ခတွေ မလိုချင်လို့ ဒုက္ခမလုပ်တာပေါ့။”
♦ ဒုက္ခသာ မလုပ်တာ၊တခြား လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေတော့သူ လုပ်တာပေါ့။
♦ အကြောင်းသိမ်းရင် အကျိုးငြိမ်း၊ လောင်စာသိမ်းရင် မီးငြိမ်း
အကြောင်းသမုဒယဆိုတဲ့ လောင်စာသိမ်းလိုက်ရင်ရုပ်နာမ် ခန္ဓာဆိုတဲ့ အကျိုးဒုက္ခ ငြိမ်းသွားမှာပဲ။
အဲဒီ ဘဝသစ် ရုပ်နာမ်ခန္ဓာ၊ ခန္ဓာဇာတ်သိမ်း ငြိမ်းရင်သင်္ကြန်တက်ပြီ၊
♦ ခန္ဓာသင်္ကြန် တက်ပြီ။
နိဗ္ဗာန်ခရီး နီးအောင် လုပ်အခုကတော့ “တို့ ဆက်ပြီး လုပ်ရဦးမှာပဲ”လို့ သဘောပေါက်။
အင်း … ပြောရမှာတောင် အားနာစရာနော်။ နိဗ္ဗာန်ခရီးပဲ လုပ်ပါတော့။ နိဗ္ဗာန်ခရီး နီးအောင် လုပ်။ ဟုတ်လား။
ဟိုက ‘မတ’ သေတာ။ဒီက ‘အ,မတ’ မသေတာ။
မသေတဲ့ခရီး နီးမှ ဖြစ်မယ်နော်။အခုပြောတဲ့ ပုံစံအတိုင်း သွားမယ်ဆိုရင် မသေတဲ့ခရီးဟာ နီးသွားမှာပါ။
အဲဒီလို တွက်ရမှာပါ။တော်လောက်ပြီလို့ စိတ်မချနဲ့အုံး။
♦ ကိုယ်က ခံစစ်တင် မဟုတ်ဘူး။ တိုက်စစ်ပါ လုပ်ရမယ်။
♦ သီလလောက် ခံစစ်နဲ့ မရသေးဘူး။
♦ဘယ်မှ သွားတိုက်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။
♦ လောဘ ဒေါသ ရန်သူကို တိုက်ရမှာ။
♦ ကိုယ့်ခန္ဓာ ကိုယ်တိုက်ရမှာ။
သာဓု … သာဓု … သာဓုပါ ဘုရား။
World of widson
ယာဉ်နှစ်စီး လမ်းဆုံ၌တိုက်မိခဲ့၍ တစ်စီးတိမ်းမှောက်ကာ(၁)ဦးသေ၊ (၁၆)ဦးဒဏ်ရာရ
၁၆.၄.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၀၀၁၅ အချိန်တွင် သာကေတမြို့နယ်၊ မင်းနန္ဒာလမ်း
အတိုင်း ဒေါပုံဘက်မှသုဝဏ္ဏတံတားဘက်သို့ ယာဉ်မောင်း အောင်ဖြိုးလတ်၊ (၂၄)နှစ်၊ (ဘ)ဦးကြာညို၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် နေသူမောင်းနှင်လာသော ယာဉ်အမှတ် 8J---- စူပါကာစတန်အမျိုးအစား နံ့သာရောင်ယာဉ်သည် သာကေတကျောက်တိုင်လမ်းဆုံအနီး ဧရာဝဏ်လမ်းမပေါ်အရောက် ဧရာဝဏ်လမ်းအတိုင်း သုဝဏ္ဏတံတားဘက်မှသာကေတအ၀ိုင်းဘက်သို့ ယာဉ်မောင်း ထွန်းလင်းအောင်၊ (၂၉)နှစ်၊ (ဘ)ဦးဗိုလ်မင်းအောင်၊ သန်လျင်မြို့နယ်နေသူမောင်းနှင်လာသောယာဉ်အမှတ် ၈ဂ/---- လိုက်ထရပ် အမျိုးအစား အဖြူရောင်ယာဉ်၏ခါးလယ်ကို ၀င်ရောက်တိုက်မိခဲ့သဖြင့်
၈ဂ/---- လိုက်ထရပ်ယာဉ်မှာ တိမ်းမှောက်သွားခဲ့ပါသည်။
ယာဉ်တိုက်တိမ်းမှောက်မှုကြောင့် ၈ဂ/--- လိုက်ထရပ်ယာဉ်ပေါ်ပါ သန်လျင်
မြို့နယ်နေ မနှင်းနှင်းအိ၊ (၂၅)နှစ်မှာဖူးရောင်ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာများရရှိခဲ့သဖြင့် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ပို့ဆောင်စဉ် လမ်း၌သေဆုံး သွားခဲ့ပြီး ယာဉ်မောင်း
(၂)ဦးနှင့် လိုက်ထရပ်ယာဉ်ပေါ်ပါ ကျား(၅)ဦး၊ မ(၉)ဦးတို့တွင် ဖူးရောင်
ပေါက်ပြဲ ပွန်းပဲ့နာကျင်ဒဏ်ရာများရရှိကာ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင်အတွင်း/
ယင်းသို့ယာဉ်မဆင်မခြင်မောင်းနှင်သူ 8J---- စူပါကာစတန်ယာဉ်မောင်း
အောင်ဖြိုးလတ် ကို သာကေတနယ်မြေရဲစခန်း ယာဉ်(ပ)၁၂/၂၀၁၄၊
ပြစ်မှုပုဒ်မ-၃၀၄-က/၃၃၇/၃၃၈ ဖြင့် အမှုဖွင့်ကာ အရေးယူဆောင်ရွက်
မနေ့က သင်္ကြန်အကြတ်နေ့ မြ၀တီမြို့၊ ရပ်ကွက်(၂)ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးအား မြ၀တီအခြေစိုက် ကရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုမှ
အကြီးအကဲတစ်ဦး၏သားပါဝင်သော ကရင်အလံများကိုင်ဆောင်ထားသော ဆိုင်ကယ်အုပ်စုမှ လက်နက်ကိုင်များ အင်အား(၇၀)ခန့် မ
ှ ဒါးဖြင့်ခုတ်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီး မောင်းပြန်လက်နက်ငယ်များဖြင့် အသင့်ပစ်ခတ်ရန်အနေအထားဖြင့် ချိန်ရွယ်ကာ ရပ်ကွက်အတွင်း ၀င်ရောက်ခဲ့ပါ
သည်။ ရပ်ကွက်(၂) ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့် ပတ္တမြားလမ်းထောင့်ရှိ မဏ္ဍပ်တွင်အဆိုပါလူစုနှင့် မဏ္ဍပ်လူငယ်များ ပြသနာဖြစ်ပွားခြင်းကို
ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ဖြေရှင်းပေးစဉ် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ယနေ့အတက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်း အဆိုပါဆိုယ်ကယ်စီးလူစုမှာ ကား များဖြင့် အင်အားဖြည့်တင်းလာပြီး တုတ်၊ဒါး၊သံပိုက်လုံးများကိုင်ဆောင်ကာ
ရပ်ကွက်အတွင်း နှစ်ရက်ဆက်တိုက် အင်အားပြလှည့်လည် ရမ်း ကားနေပါသည်။ ရပ်ကွက်လူငယ်များမှ ပြန်လည်ခုခံရန် အသင့်စုဖွဲ့နေပါသည်။
ထိုဖြစ်စဉ်ကြောင့် ရေကစားမည့်သူများ မရှိတော့ပဲ ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ နေအိမ်များလည်း အိမ်တံခါး များ ပိတ်ကာနေကြရပါသည်။
ဓါတ်ပုံမှာ ယနေ့နေ့လည်ပိုင်း လုံခြုံရေး အဖွဲ့ရောက်ရှိလာစဉ်ပုံနှင့် ရပ်ကွက်လူငယ်များပုံများဖြစ်ပါသည်။
ပေးပို့သူ/ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်သားတစ်ဦး၊ မြ၀တီမြို့
အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ဈေးဝယ်မှုများကို စောင့်ကြည့်မှတ်သားမည့် Software ကို Google စမ်းသပ်
အင်တာနက်ကုမ္ပဏီကြီး Google က အွန်လိုင်းကနေ ဈေးဝယ်ယူမှုတွေကို စောင့်ကြည့်မှတ်သားတဲ့ software တစ်ခုကို စမ်းသပ်နေပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ Google ရဲ့ software က အွန်လိုင်းကနေ ဈေးဝယ်ယူမှုတွေကို စောင့်ကြည့်မှတ်သားပြီး အဆိုပါ အချက်အလက်တွေကို ၎င်းတို့ရဲ့ အွန်လိုင်းကြော်ငြာလုပ်ငန်းမှာ ပိုမိုထိရောက်အောင် အသုံးချသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ software ကို အသုံးပြုပြီး Google မှာ အွန်လိုင်းကြော်ငြာထည့်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေကို ကြော်ငြာတွေကိုကြည့်ပြီး ဖောက်သည်တွေက အမှန်တစ်ကယ် ဝယ်ယူကြတယ်ဆိုတာ Google က သက်သေပြဖို့ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Google ဟာ အွန်လိုင်းကြော်ငြာလုပ်ငန်းကနေ ဝင်ငွေအများအပြား ရရှိနေပြီး ယခု အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့ software က Google အတွက် ကြော်ငြာဝင်ငွေ ပိုမိုရရှိလာစေမှာဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ကြပါတယ်။ အဆိုပါ software ကို Google ရဲ့ လက်ရှိ အွန်လိုင်းကြော်ငြာ software ဖြစ်တဲ့ AdWords နဲ့ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နတ်တလင်းမြို့နယ် တာစုကံစုကျေးရွာ၌ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှု ဖြစ်ပွား
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး သာယာဝတီခရိုင် နတ်တလင်းမြို့နယ်ရှိ ဆီဆုံကုန်းကျေးရွာအုပ်စု တာစုကံစုကျေးရွာနေ အသက်(၂၂)နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦးသည် ဘာသာခြားတစ်ဦးနှင့် ချစ်ကြိုက်နေပြီး ယမန်နေ့ ညပိုင်းတွင် ထိုအမျိုးသားမှာ အဆိုပါနေအိမ်တွင် ရောက်ရှိနေကြောင်း သိရှိရသဖြင့် ရွာသူရွာသားများက မကျေမနပ်ဖြစ်ပြီး ယမန်နေ့ ည ၁၁ နာရီခွဲခန့်မှစ၍ အဆိုပါနေအိမ်အား ၀ုိုင်းထားခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်ဖြစ် ပေါ်နေကြောင်း သတင်းအရ နတ်တလင်းမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဇော်လွင်၊ မြို့နယ်မှူး ရဲမှူး အောင်သန်းဦးစီးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ အထောက်အကူပြု အဖွဲ့များက အဆိုပါကျေးရွာသို့ ယနေ့ နံနက် ၃ နာရီခန့်တွင် ရောက်ရှိပြီး နယ်မြေတည်ငြိမ်ရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်း ဆောင်ရွက်ကြရန် ညှိနှိုင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းသို့ ပြောကြားနေစဉ် ကာယကံရှင်အမျိုးသမီးက အိမ်ပေါ်မှ မခြေမငံ အော်ဟစ် ပြောဆိုလာသဖြင့် ရွာသူရွာသားများက နေအိမ်အား ခဲများဖြင့်ပစ်ပေါက်ခြင်း၊ ထိုအမျိုးသားစီးနင်းလာသော ဆိုင်ကယ်အား ဖျက်ဆီးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် အဖွဲ့က အကြမ်းမဖက်ကြရန် မေတ္တာရပ်ခံပြီး ယင်းအမျိုးသားအား လုံခြုံရာသို ရွှေ့ပြောင်းပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း ၊ ထို့နောက် တာဝန်ရှိသူတို့က ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သဖြင့် နံနက် ၄ နာရီ ခွဲခန့်တွင် လူစုကွဲသွားကြောင်း၊ အခင်းဖြစ်ပွားရာ နေရာသို့ သာယာဝတီ ခရိုင် ရဲမှူးနှင့်အဖွဲ့ ထပ်မံရောက်ရှိလာပြီး ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ သည့်အတွက် ယခုအခါ နယ်မြေတည်ငြိမ်အေးချမ်း သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သတင်းရရှိ သည်။
မောင်းနှင်ထွက်ခွာသည့် ရထားရှေ့သို့ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှ ခုန်ချသဖြင့် ရထားကြိတ်ခံရ၍ သေဆုံး
၁၆.၄.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၀၇၄၅ အချိန်တွင် ကမာရွတ်မြို့မရဲစခန်းမှ
တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ လှည်းတန်းဘူတာတွင် လူတစ်ဦးရထားတိုက်ခံရပြီး သေဆုံးသွားကြောင်းသတင်းအရ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ သေဆုံးသူမှာ ဦးခင်မောင်လင်း၊ (၅၁)နှစ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်နေသူဖြစ်ပြီး ၀ဲပေါင်ပြတ်၊ ယာလက်ပြတ်၊ ယာပေါင်ကြေမွ၊ နဖူးပေါက်ပြဲဒဏ်ရာများရရှိကာ သေဆုံးနေသည်ကို
ဖြစ်စဉ်အားစုံစမ်းရာ ၀၇၃၀ အချိန်ခန့်က စက်ခေါင်းအမှတ် DF-1221.63 ရန်ကုန်-ပြည် အဆန် စာပို့ရထားမှာ လှည်းတန်းဘူတာမှ မောင်းနှင်
ထွက်ခွာစဉ်၎င်းသည် ဘူတာပလက်ဖောင်းပေါ်မှရထားရှေ့သို့ခုန်ချခဲ့သဖြင့် ရထားကြိတ်မိပြီး သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
၎င်းသေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကမာရွတ်မြို့မရဲစခန်း သေမှုသေခင်း
အမှတ်စဉ် (၄/၂၀၁၄)ဖြင့် ရေးဖွင့်ကာ စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
သံတွဲမြို့တွင် လုယက်မှု ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်သူအား ဖမ်းဆီးရမိ
သံတွဲ ဧပြီ ၁၆
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၆ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၁း၀၀ နာရီအချိန်ခန့်က သံတွဲမြို့နယ်၊ အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ အိမ်အမှတ် (၂၀) နေ မရွှေနီလာမြင့် အသက် (၃၄) နှစ် (အဘ) ဦးရဲမြင့်သည် နေအ်ိမ်ဈေးဆိုင် တွင်ဈေးရောင်းနေစဉ် အမည်မသိလူ (၂) ဦးမှ နှာခေါင်းစည်း အနက်ရောင် (Mask) တပ်လျက် ဆိုင်ကယ်ဖြင့်ရောက်ရှိလာပြီး ဆိုင်ထဲဝင်လာသဖြင့် မရွှေနီလာမြင့်မှ ဘာလိုချင်ပါသလဲဟု မေးရာ ၎င်းတို့မှ အရုပ်လိုချင်တယ်ဟု ပြော၍ မရွှေနီလာမြင့်မှ ဆိုင်ထဲရှိ သိုးမွှေးဝက်ဝံရုပ်များကို ချပြပြီး ဈေးနှုန်းပြောနေစဉ် အသင့်ပါလာသော အရိုးသွား (၁၀) လက်မခန့်ရှိ ဓားဦးချွန်ဖြင့် မရွှေနီလာမြင့်၏ ဝမ်းဗိုက်အား ထောက်ရာ မရွှေနီလာမြင့်မှ လက်ဖြင့် ပုတ်ချလိုက်၍ ဓားလွှတ်ကျသွားစဉ် “ဓားပြတိုက်တယ်” ဟု အော်ပြီး ၎င်းအား ဆိုင်အပြင်သို့ တွန်းထုတ်ပြီး မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်မေမေမြင့် အသက် (၅၅)နှစ် (အဘ) ဦးတင်ဖေ ရောက်ရှိလာပြီး ထိုလူအား လှမ်းဆွဲစဉ် ဒေါ်မေမေမြင့်၏ လက်အားကိုက်ပြီးတွန်းထုတ်သဖြင့် ဖင်ထိုင်လဲကျသွားပြီး ဒေါ်မေမေမြင့်တွင် တင်ပစုံရိုး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ၎င်းအား အနီးဝင်းကျင်ရှိ လူများမှ ဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးပြီး မေးမြန်းရာ ဌေးလှိုင်ဦး (၂၆) နှစ် (အဘ) ဦးစန်းလွင်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပြီး ဆိုင်အတွင်း ဝင်ရောက်၍ လုယက်ကျူးလွန်ရာ အားထုတ်သူ ဌေးလှိုင်ဦးအပေါ် ဥပဒေအရ အရေးယူပေးပါရန် မရွှေနီလာမြင့်မှ တရားလိုပြုလုပ် တိုင်တန်းခဲ့၍ သံတွဲမြို့မ ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ အဆိုပါအမှုအား သံတွဲမြို့မ ရဲစခန်းမှ ရဲအုပ် ကျော်အောင်မှ လက်ခံစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
(၁) ဆရာရှင့် ကျမကအသက် ၃၁ နှစ်ရှိပါပြီ။ သားနှစ်ယောက်မွေးပြီးနောက် ကိုယ်ဝန်သုံးကြိမ် miss abortion ဖြစ်တယ်။ အခု နောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်ဖြစ်တာ ၃ လရှိပါပြီဆရာ။ ကလေး ထပ်ယူချင်လို့ ဘာတွေစစ်ဆေးဖို့လိုပါသလဲဆရာ။ ကျမက abortion ဖြစ်တိုင်း ကိုယ်ဝန် ၅ လမှာဖြစ်တယ်။ ကလေးက နှလုံးမခုန်တော့ဘူးလို့ ပြောပါတယ်ဆရာ။ ထပ်မဖြစ်အောင် လိုအပ်တဲ့အကြံလေးပေးစေချင်ပါတယ်။
(၂) Missed abortion အကြောင်းနဲ့ ထပ်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်လို့ ရနိုင်မဲ့နည်းလမ်းရှိရင် သိခွင့်ရချင်ပါတယ်ရှင်။
“ကိုယ်ဝန်လဲ ရှိနေပြီး မလွဲမသွေလဲ ပျက်တော့မယ်” ဆိုတာကို Missed abortion ခေါ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်းတမျိုး ဖြစ်တယ်။ သွေးတော့ မဆင်းသေးဘူး။ ဗိုက်နာတာလဲ မရှိသေးပါ။ ကိုယ်ဝန်က ဆက်ပြီး ကြီးထွားမလာတော့ပါ။ ကိုယ်ဝန်ရှိတယ်သာပြောရတာ သန္ဓေသားက ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်လာအုံးမယ်။ ဖြစ်လာပြီးရင်လဲ အသက်မဝင်တော့ဘူး။ ဒါက သဘာဝတရားလို့ ခပ်လွယ်လွယ်ပြောနိုင်တယ်။ တခုခု လုပ်လိုက်လို့ ဥပမာ ဖျက်ဆေးသောက်တာ၊ ချော်လဲတာ၊ ပိုးဝင်တာ ဘာမှမလုပ်ရပါဘဲနဲ့ သူ့သဘောသူဆောင်ပြီး ပျက်တာကို ဆိုလိုတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေ့ရင် ဆရာဝန်က စောင့်မနေတော့ဘဲ ဆေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ခြစ်ထုတ်တာဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေးမယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ မတွေ့သူမှာ သွေးဆင်းလာမယ်။ ဒါကိုတော့ Miscarriage လို့ သတ်မှတ်တယ်။
အမျိုးသမီး ကိုယ်ခန္ဓာကနေ အထဲမှာ ပျက်စီးသွားတာကို ထုတ်ပြစ်ဘို့ လုပ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေရာမှာ အမျိုးသမီး ကိုယ်ခန္ဓာက သန္ဓေ သေသွားတာ မသိလိုက်ဘူး။ သန္ဓေတည်လိုက်တာတောင် သိချင်မှသိမယ်။ ဒါကြောင့် ထုတ်ပြစ်ရမဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ရကောင်းမှန်း မသိဘူး။ ဒီလိုအခြေအနေကို Mayo Clinic ကနေ ဆေးဝေါဟာရတခုသုံးတယ်။ Missed miscarriage တဲ့။ သိထားဘို့က မြန်မာတွေ လူတိုင်းလိုလို Abortion (အဘောရှင်း) ဆိုတာ ကိုယ်ဝန် ပျက်တာရော ဖျက်တာရောကို ရောခေါ်ကြတယ်။ ဆေးပညာအရ ဆိုတာ တမင်တကာ ဖျက်တာကိုမှ Abortion ခေါ်ရတယ်။ သူ့အလိုလို ပျက်သွားတာကို Miscarriage လို့ခေါ်ရတယ်။ ဒါကြောင့် Missed miscarriage လို့သုံးတာ သင့်လျှော်တယ်။
Abortion (အဘောရှင်း) ဆိုတာ ဆေးစာအရပြောရရင် သုက်ပိုး နဲ့ မျိုးဥတို့ မျိုးစပ်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာ ဆက်ဖြစ်လာနေတဲ့ Conception products သန္ဓေ (တစ်ရှူး) တွေဟာ တမင်လုပ်လို့ဖြစ်ဖြစ်၊ သူ့ဖါသူဖြစ်ဖြစ် ၂ဝ ပါတ် မတိုင်ခင် ဆုံးရှုံး-ပျက်စီးသွားခြင်းလို့ ခေါ်တယ်။
Blighted Ovum ပျက်စီးသွားသော မျိုးဥ
တကယ်လို့ သုက်ပိုးနဲ့ မျိုးဥ နှစ်ခုက ပေါင်းစပ်ကြမယ်။ (ဆဲလ်) တခုတည်းကနေ နှစ်ဆတိုးနည်းနဲ့ စဉ်တိုက်ဆက်တိုက် ပွါးများလာတယ်။ Placenta အချင်း နဲ့ Membranes အချင်းလွှာတွေဖြစ်လာမယ်။ ဒါပေမဲ့ Embryo သန္ဓေဖြစ်မလာဘူး။ ဒီအခြေအနေမျိုးကို Blighted ovum ပျက်စီးသွားသော မျိုးဥ လို့ ခေါ်တယ်။ သန္ဓေသာဖြစ်မလာတယ် အမျိုးသမီးမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင် လက္စဏာတွေတော့ ရှိလာတယ်။ ဆီး-သွေးထဲမှာ Pregnancy hormone (hCG) ကိုဝ်ဝန်ဟော်မုန်း ပါနေပြီမို့ စစ်ရင် အပေါင်းပြမယ်။ ကိုယ်ဝန် ၁၂ ပါတ်အတွင်းဖြစ်တဲ့ Miscarriages ကိုယ်ဝန်အလိုလိုပျက်တာတွေထဲမှာ တဝက်ကျော်ကျော်မှာ ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်။ ဖြစ်ရင် Spontaneous miscarriage ချက်ချင်းကိုယ်ဝန်ပျက်တာ ဒါမှမဟုတ် Missed abortion ကိုယ်ဝန် အလိုလိုပျက်ခြင်း ဆက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
Molar pregnancy စပျစ်သီးကိုယ်ဝန်
ကိုယ်ဝန် ၁ဝဝဝ မှာ တယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ Gestational trophoblastic disease ရောဂါလို့ခေါ်တယ်။ အချင်း (ဆဲလ်) တွေက ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ ဖြစ်လာပြီး အိတ်လေးတွေလို ဖြစ်လာတယ်။ သန္ဓေက ဖြစ်လာအုံးတာ့ မရှင်နိုင်တော့ဘူး။ Spontaneous miscarriage ဒါမှမဟုတ် Missed abortion ကိုယ်ဝန် အလိုလိုပျက်ခြင်း ဆက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
• Pregnancy symptoms cessation ကိုယ်ဝန်ရှိစ လက္စဏာတွေ အဆုံးသတ်သွားခြင်း။ ရင်သားနာတာ၊ ပျို့-အန်ချင်တာ၊ ချဉ်ခြင်းတပ်တာတွေ၊ ဆီးခဏခဏ သွားချင်တာတွေ ဆက်မရှိတော့ဘူး။
• Pregnancy test ကိုယ်ဝန်ဆီးစစ်တာကတော့ ပျက်သွားလဲ အပေါင်းဆက်ပြနေအုံးမယ်။
• Not known အများအားဖြင့် ဘာလို့ ပျက်သလဲ မပြောနိုင်ပါ။
• Old ages မိဘလုပ်သူတွေ အသက်ကြီးနေကြတာ၊
• Narcotic and Alcohol (ကိုကိန်း) သုံးစွဲတာ၊ အရက်သောက်တာ၊
ကိုယ်ဝန်ပျက်တာမှန်သမျှ ၁၄ ပါတ်အတွင်းမှာ ၉၉% ဖြစ်တယ်။ Pregnancy tests စမ်းရင် နောက်တကြိမ်ရာသီလာရမဲ့ရက်ထက် နောက်တပါတ်နေလို့မှ မလာချိန်ကစပြီး စစ်နိုင်ပြီ။ အဖို (သုက်ပိုး)-အမ (မျိုးဥ) တွေ့ကြပြီးတဲ့နောက် ၁ဝ ရက်ဆိုရင် အပေါင်းပြနိုင်တယ်။ Ultrasound လုပ်ရင် ၅-၆ ပါတ်မှာ မြင်လာရမယ်။ Missed abortion ဖြစ်နေရင် သားအိမ်ထဲက မကောင်းတော့တဲ့ (တစ်ရှူး) တွေဟာ ၃-၄ ပါတ်နေရင် ထွက်ကျလာနိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန် ရင့်ရင် ရင့်သလို သွေးတွေ အများကြီးဆင်းနိုင်တယ်။ ကာရံမသင့်ရင် ပိုးဝင်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာဝန်က ဆေးနည်း၊ ခွဲနည်း တခုခု လုပ်ပေးတယ်။
• Complete Abortion ကိုယ်ဝန်က ပျက်သွားပြီးဖြစ်လို့ လုပ်ပေးစရာမလိုပါ။ သွေးအားနည်းနေရင် လုပ်ပေးရမယ်။
• Inevitable Abortion ကိုယ်ဝန် ပျက်ကိုပျက်တော့မဲ့သူ နဲ့ Incomplete Abortion ပျက်ကို ပျက်တော့မဲ့သူတွေကို Septic Abortion ကိုယ်ဝန်ပျက်စဉ် ပိုးဝင်တာ မဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။ မဟုတ်ရင် အသက်အန္ကရာယ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်။ သွေးဆင်းများသွားရင်လဲ (ရှော့ခ်) ရနိုင်တယ်။
• ဒီလို ကံမကောင်း အကြောင်းမလှ ဖြစ်ရတာဟာ မိဘနှစ်ပါး အပြစ်မဟုတ်ပါ။ ကလေးရဲ့ ကံတရားအစစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တခါဖြစ်တဲ့နောက် ကံကောင်းတဲ့ ကလေးကို စောင့်မျှော်နိုင်ကြပါတယ်။
Amenorrhea ရာသီမလာတာကို စောင့်ရှောက်ခြင်း
ရာသီမလာတာ ၆-၁၄ ပါတ်မှာ ဆီးစစ်တော့ အပေါင်းပြနေတယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဝန်အပ်ရမယ်။ (၂) မျိုးစစ်လိမ့်မယ်။
1. Hb Blood grouping လုပ်မယ်။ လိုအပ်ရင် Anti-D ဆေးထိုးရမယ်။
2. Ultrasound ရိုက်မယ်။
Ultrasound ရိုက်ရင် (၄) မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။
(၁) Viable intrauterine pregnancy သားအိမ်ထဲမှာ ရှင်သန်နေတဲ့ သန္ဓေရှိနေတာတွေ့မယ်။
(၂) Empty uterus သားအိမ်ထဲမှာ သန္ဓေမတွေ့တာဖြစ်မယ်။
(၃) Incomplete abortion ကိုယ်ဝန် တပိုင်းတစ ပျက်မယ်။
(၄) Missed abortion ဖြစ်နိုင်တယ်။
(၁) ကိုယ်ဝန်ဆက်ကောင်းနေတာဆိုရင် Antenatal care (ANC) ကိုယ်ဝန်ဆောင်စောင့်ရှောက်မှု ပုံမှန် ဆက်လုပ်နေရမယ်။
(၂) သားအိမ်ထဲမှာ သန္ဓေမတွေ့တာဆိုရင် Ectopic pregnancy သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်ခြင်းအတွက် ကုသရမယ်။ ခွဲစိတ်ရမယ်။ ပေါက်သွားမှဆိုရင် အရေးပေါ် ခွဲစိတ်ရမယ်။ သွေးလိုနိုင်တယ်။ (ရှော့ခ်) ရနိုင်တယ်။
(၃) ကိုယ်ဝန် တပိုင်းတစ ပျက်တာဆိုရင် သွေးတွေ ဆင်းမယ်။ ဗိုက်နာမယ်။ သားအိမ်ဝမှာရှိနေတာ Speculum ကရိယာသုံးပြီး ထုတ်ပေးမယ်။
ပြီးတာနဲ့ Ergometrine 0.5 mg ထိုးပေးမယ်။ သွေးဆင်းတာ မရပ်သေးရင် သားအိမ်ထဲကျန်တာတွေ ထုတ်ပေးမယ်။ ERPC (evacuation of retained products of conception) ခေါ်တယ်။
(၄) Missed abortion ဖြစ်တာဆိုရင် တိုင်ပင်ဆုံးဖြတ်ဘို့လိုမယ်။
(က) စောင့်အုံးမလား၊ စောင့်မယ်ဆိုတာ ၁ဝ ရက်နေရင် (အာလ်ထွာဆောင်း) တခါ ထပ်ရိုက်တာဖြစ်တယ်။ မကောင်းတာ သေခြာရင် (ခ) အတိုင်းလုပ်ရမယ်။
(ခ) မစောင့်ချင်ရင် ERPC (evacuation of retained products of conception) သားအိမ်ထဲကျန်တာတွေ ထုတ်ပေးမယ်။
မြန်မာ့သင်္ကြန် ပျက်ပြီလို့ မပြောနိုင်ဘူး (စာရေးဆရာ ကြည်မင်းနဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်)
ဒီနှစ် မြန်မာ့သင်္ကြန်ပွဲတော်ရက်အတွင်း အရက်ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ စပွန်ဆာနဲ့ စင်ပေါ်တက် ကော့ကန်ကားလုပ်ပြနေသူတွေကို ထိုင်ကြည့်နေတဲ့အစိုးရကို မကြိုက်ဘူးလို့ စာရေးဆရာ ကြည်မင်းက ဝေဖန် ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ဒီလို လုပ်နေသူတွေဟာ ကွက်ကွက်ကလေး လူနည်းစုပဲ ဖြစ်တာမို့ မြန်မာ့သင်္ကြန် ပျက်ပြီလို့တော့ မပြောနိုင်ဘူးလို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ဒီနှစ် သင်္ကြန်တွင်း ရန်ကုန်မြို့ ကန်တော်ကြီး ကန်ပတ်လမ်းမှာ ရှိတဲ့ အရက်ကုမ္ပဏီတခုရဲ့ ဖျော်ဖြေရေးမဏ္ဍပ်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံက အမျိုးသမီးအကတဖွဲ့ရဲ့ ကပြဖျော်ဖြေခဲ့ပုံတွေဟာ အင်တာနက် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ် တက်လာပြီး လူပြောသူပြော များခဲ့ပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ စာရေးဆရာ ကြည်မင်းကို ဒီဗွီဘီက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထား ပါတယ်။
ထန်တပင်မြို့နယ်တွင် ယာဉ်တိုက်တိမ်းမှောက်သဖြင့် (၇)ဦးဒဏ်ရာရ
၁၅.၄.၂၀၁၄ရက်နေ့ ၁၅၄၀ အချိန်တွင်ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-ပုသိမ်
လမ်းမကြီးအတိုင်း ထန်းတပင်ဘက်မှ ညောင်တုန်းဘက်သို့ ယာဉ်မောင်း ဖိုးခွား(ခ)ကရင် (၃၂)နှစ်၊ စမ်းချောင်း မြို့နယ်နေသူ မောင်းနှင်လာသော ၄ဂ--- လင်ခရူဇာ ခဲရောင်ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်သည် မိုင်တိုင် အမှတ်(၈/၇)နှင့်
5G---ဟိုက်ဂျက်မာဇဒါအဖြူရောင် ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်ကို နောက်မှဝင်ရောက်
တိုက်မိခဲ့ရာ ယာဉ်(၂)စီးမှာ လမ်း၏ယာဘက် ပေ (၃၀)ခန့်အကွာရှိ
အနက်ပေ (၃၀)၊ အကျယ် (၁၅)ပေခန့်ရှိသော မြောင်းအတွင်းသို့ ထိုးကျ
တိမ်းမှောက် သွားခဲ့ပြီး လင်ခရှုဇာယာဉ်မောင်းဖြစ်သူ ဖိုးခွား(ခ)ကရင်မှာ အခင်းဖြစ်နေရာတွင် ယာဉ်ကိုထားကာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုကြောင့် 5G--- ယာဉ်ပေါ်ပါ ယာဉ်မောင်း ဦးလှကြည်ပါ(၇)ဦးတို့တွင် ဒဏ်ရာများအသီးသီးရရှိခဲ့၍ လှိုင်သာယာ
ဆေးရုံမှတစ်ဆင့် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ ပိုအပ်ကုသခဲ့ရာ အတွင်း/အပြင် လူနာ(မစိုးရိမ်ရ)များအဖြစ် ကုသမှုခံယူခဲ့ရပါသည်။
ယင်းကဲ့သို့ယာဉ်မဆင်မခြင်မောင်းနှင်သူယာဉ်မောင်း ဖိုးခွား(ခ)ကရင်အား ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ တက်သစ်နယ်မြေရဲစခန်းယာဉ် (ပ)၃၅/၂၀၁၄၊ ပြစ်မှု
ပုဒ်မ-၂၇၉/၃၃၇/၃၃၈/၂၀၂ ဖြင့်အမှုဖွင့်ကာ ဖမ်းဆီးရမိရေး
ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။
Myanmar celebrity တို့ရဲ့ သင်္ကြန်ဖက်ရှင် - မထက်၊ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း၊ အာဇာနည်၊ ဝမ်း၊ ဝါဆိုမိုးဦး
Rဇာနည် + ဝမ်း
အာဇာနည်နှင့် သူ၏ သားလေး
ပဲခူးမြို့နယ်၊ ကမာနတ်ကျေးရွာတွင် ဘုရားပင့်လာသောယာဉ်အား ၀ိုင်းရိုက်မှုဖြစ်ပွား
ဒေါ်ကြည်ဝင်း (၆၄)နှစ် (ဘ)ဦးကျော်အုန်း၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ လှဇင်းတောင်ကျေးရွာ၊ သနပ်ပင်မြို့နယ်နေသူ သည် ၈ဂ/၉၃၅၈ အဖြူရောင် တောင်းအေ့စ်ယာဉ်အား သားဖြစ်သူ ရွှေသိန်း (၃၂)နှစ် (ဘ)ဦးကျင်ရွှေ အား မောင်းနှင်စေပြီး ယာဉ်ပေါ်တွင် သန်းလွင်၊ သက်ဖြိုးဦး၊ ကိုနိုင်သက်၊ ကိုနိုင်၊ စိုးနိုင်တို့လိုက်ပါလျက် ဘုရားပင့်ဆောင်ကာ သနပ်ပင်မြို့မှ ရန်ကုန်မြို့သို့ထွက်ခွါလာစဉ် ၁၅-၄-၂၀၁၄ ရက်နေ့ နေ့လည်(၁၂း၄၀) အချိန်တွင် ပဲခူးမြို့နယ်၊ ကမာနတ်ကျေးရွာထိပ်ရေကစားမဏ္ဍပ်အရောက်၌ ရေမပက်ရန်နှင့် ဘုရားပင့်ဆောင်လာကြောင်း ပြောဆိုတောင်းပန်သော်လည်းမရဘဲ ရွှေသိန်းအား ကား ပေါ်မှဆွဲချကာ လက်သီးဖြင့်ထိုး၊ ခဲများဖြင့်ဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်သဖြင့် ကားပေါ်မှဆင်းပြေးခဲ့ရာ ကမာနတ်ရွာနေ ဇော်ဇော်၊ မင်းမင်း၊ ဟန်နုကျော်နှင့်အပေါင်းပါများမှ အရှည်(၂)တောင်ခန့်ရှိ သံတုတ်များဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းရိုက်နှက်သဖြင့် ရွှေသိန်းနှင့် သန်းလွင်တို့တွင် ဦးခေါင်းပေါက်ပြဲဒဏ်ရာ၊ ကိုနိုင်သက်လွင်တွင် ၀ဲပုခုံးဖူးရောင်နာကျင်ဒဏ်ရာ၊ သက်ဖြိုးဦးတွင် ၀ဲလက်မောင်းဖူးရောင်နာကျင်ဒဏ်ရာ၊ စိုးနိုင်တွင် ယာလက်မောင်း ဖူးရောင်နာကျင်ဒဏ်ရာ၊ ကိုနိုင်တွင် ယာမေးဖျားပေါက်ပြဲနာကျင်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့သည့် အပြင် ၈ဂ/၉၃၅၈ ယာဉ်၏ ရှေ့လေကာမှန်ကွဲပြီး ဘုရားကျောင်းဆောင်ပျက်စီးခဲ့သဖြင့် ပဲခူးမြို့မရဲစခန်း (ပ)၂၄၆/၂၀၁၄ ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ၊ ၃၂၅/၄၂၇/၁၁၄ အရ အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း သတင်းရရှိ သည်။
သင်္ကြန်ရေကစားမဏ္ဍပ်များ၌ ခါးပိုက်နှိုက်မှုကျူးလွန်သူများကို ဖမ်းဆီး အရေးယူ
အုပ်ချုပ်မှုတပ်ခွဲ၊ မှုခင်းအကူဌာနစုမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ရေကစားမဏ္ဍပ်
များ၌ ခါးပိုက်နှိုက်များဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက် သတင်းစုံစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့
ထိုသို့ဆောင်ရွက်နေစဉ် လှိုင်မြို့နယ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ပြည်လမ်းပေါ်ရှိ
Air Bagan ရေကစားမဏ္ဍပ်ရှေ့၌ ရေကစားနေသော အမျိုးသားများ၏
ဘောင်းဘီအိတ်ကပ်အတွင်းမှ ငွေများနှိုက်ယူ နေသူများဖြစ်သည့် တင်အောင်လင်း(ခ)ဖားကြီး၊ (၂၁)နှစ်၊ (ဘ)ဦးမျိုးငွေ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊
နေသူကို ငွေကျပ်(၅၁၀၀)နှင့်လည်းကောင်း၊ သိန်းအေး၊ (၁၈)နှစ်၊ (ဘ)ဦးသိန်းဆွေ၊ ရှမ်းချောင်းကျေးရွာ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်နေသူကို
ငွေကျပ်(၄၁၀၀)နှင့်လည်းကောင်း၊ မြင့်သန်း၊ (၂၉)နှစ်၊ (ဘ)ဦးဖေတင်၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်နေသူအား HUAWEI အမျိုးအစား အနက်ရောင်
ဟန်းဆက် (၁)လုံးနှင့် ငွေကျပ်(၄၀၀၀)တို့နှင့်လည်းကောင်း၊ ငရှဉ့်(ခ)
၀င်းထွဋ်၊ (၁၈)နှစ်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်နေသူကို ငွေကျပ်(၅၈၀၀)နှင့်
လည်းကောင်း၊ ၀င်းမြင့်အောင်(ခ)အထစ်၊ (၂၀)နှစ်၊ (ဘ)ဦးမြင့်အောင်၊ ပဲခူးမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနေသူအား လက်ကိုင်ဖုန်း(၂)လုံး၊ ငွေကျပ်
(၃၁၅၀၀) နှင့်လည်းကောင်း၊ မိုးသန်းဌေး၊ (၂၂)နှစ်၊ (ဘ)ဦးဌေးအောင်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်နေသူကို လက်ကိုင်ဖုန်း(၂)လုံး၊ ငွေကျပ်(၃၈၅၀၀)နှင့်
လည်းကောင်း၊ မပပ၀င်း၊ (၂၆)နှစ်၊ (ဘ)ဦးပေါက်စ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်
နေသူကို ငွေကျပ်(၆၂၀၀၀)နှင့်လည်းကောင်း တွေ့ရှိဖမ်းဆီးရမိခဲ့သဖြင့် ၎င်းတို့ (၇)ဦးအား လှိုင်မြို့မရဲစခန်းတွင် အမှုများရေးဖွင့်ကာ အရေးယူ
ဆက်လက်၍ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းပေါ်ရှိ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်ရှေ့ ပိတောက်ချစ်သူ ရေကစားမဏ္ဍပ်ရှေ့၌ရေကစား
နေသော အမျိုးသားတစ်ဦး၏ဘောင်းဘီ အိတ်ကပ်အတွင်းမှ ငွေကျပ်
(၄၂၂၅၀)ပါ ပိုက်ဆံအိတ်(၁)လုံးကိုနှိုက်ယူခဲ့သူများဖြစ်သည့် ဒဂုံမြို့သစ်
(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်နေ ငတိ(ခ)သက်ထွန်းအောင်၊(၄၇)နှစ်၊ (ဘ)ဦးရွှေနှင့် အင်းစိန် မြို့နယ်နေ စိုးလင်း(ခ)အောင်မင်းထိုက်၊ (၂၄)နှစ်တို့(၂)ဦးကို
တွေ့ရှိဖမ်းဆီးရမိသဖြင့် ရန်ကင်းမြို့မရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ကာ အရေးယူ
ငွေဆောင် ဧပြီ ၁၆
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ငွေဆောင်မြို့နယ်ခွဲ သပြေခုံကျေးရွာတွင် ဧပြီ ၁၄ ရက်နေ့က မိမိနေအိမ်နှင့် မိသားစုအားမီးရှို့ ထွက်ပြေးသွားသော တရားခံဇင်နိုင်လင်းအား ၁၅ ရက် ညနေ ၆း၃၀ အချိန်တွင် ယင်းမီးရှို့ ခဲ့သည့်နေအိမ်၏ အရှေ့ဘက် ၂ ဖာလုံခန့် အကွာရှိ မီးသွေးဖိုအဟောင်းတွင် မီးလောင်ဒဏ်ရာများဖြင့်တွေ့ ရှိရ၍ မြို့နယ်ခွဲရဲစခန်းမှ ငွေဆောင်ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်၍ ဆေးကုသမှုခံယူလျှက်ရှိပြီး မီးလောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်လျှက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
သုံးခွ ဧပြီ ၁၄
ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် သုံးခွမြို့နယ် အမှတ်၉ ရပ်ကွက် အောင်ဇေယျလမ်းမဘေးရှိ ဝဲပြန်ဘုန်းကြီး ကျောင်းတိုက်ရှေ့၌ ဧပြီ-၁၄-ရက် ညနေ-၅-နာရီ ၅၀မိနစ်အချိန်ခန့် က ဘာဘူ(ခ)ရဲဝင်းလှိုင်- ၂၈-နှစ် (ဘ)ဦးတင်လှိုင်(ဗုဒ္ဓ/ဗမာ) ဈေးရောင်းအမှတ်-၆-ဗန္ဓုလလမ်း-၁၀-ရပ်ကွက်နေသူနှင့် မျိုးမင်းအောင်-၂၀-နှစ် (ဘ)ဦးသန်းမြင့်-၉-ရပ်ကွက်နေသူတို့နှစ်ဦး ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာမှ မျိုးမင်းအောင်က ခါးကြားတွင် အသင့်ပါလာ သော ချွန်ထက်သောအရာဖြင့် ထိုးသဖြင့် ဘာဘူ(ခ)ရဲဝင်းလှိုင် တွင် ဝဲဘက်နို့အုံအောက်ထိုးသွင်းဒါဏ်ရာ-၁-ချက် ဝဲခါးထိုးသွင်းဒါဏ်ရာ-၁-ချက်နှင့်ယာနား lနှာ ခေါင်းတို့ တွင် ပွန်းပဲ့ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာများ ရှိခဲ့ကြောင်း ဒါဏ်ရာရှိသူ ဘာဘူ(ခ)ရဲဝင်းလှိုင်မှာ ဒါဏ်ရာအနည်းငယ်ပြင်းထန်သဖြင့် သုံးခွပြည်သူ့ဆေးရုံမှ ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီးသို့ လွှဲပြောင်းပို့ဆောင်၍ ဆေးကုသမှုခံယူစေခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ သုံးခွမြို့မရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှ (ပ)၁၄၄/၂၀၁၄lပြစ်မှုပုဒ်မ-၃၂၆-အရအမှုဖွင့်လှစ်၍ တရားခံ မျိုးမင်းအောင်အား ဖမ်းဆီးအရေးယူဆောင်ရွက်ထားကြောင်း သိရသည်။
များအား လက်ကို နှိပ်နှယ်ပေး ခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်းစေတဲ့ နည်းကောင်းလေးတွေကို
တောင်ကိုရီးယား အနောက်တောင် ကမ်းရိုးတန်းမှာ လူ ၄၇၀ ဦး တင်ဆောင်ထားတဲ့ ခရီးသည်တင်သင်္ဘော နစ်မြှုပ်
အန်ဆန်ဒန်ဝမ် အထက်တန်းကျောင်းသား ၃၂၅ ယောက်အပါအ၀င် ခရီးသည်နဲ့ အမှုထမ်း ၄၇၆ ယောက်ဟာ အင်ချုံကနေ ဂျဲဂျုကို သွားရင်း ခုလိုဖြစ်တာလို့ လုံခြုံရေးနဲ့ ပြည်သူ့စီမံရေး ဒုဝန်ကြီးနဲ့ အရေးပေါ်ဗဟိုဌာနချုပ် ခေါင်းဆောင် လီဂယောင်အုတ်က ပြောပါတယ်။
ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် ရဟတ်ယာဉ် ၁၈ စီး မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ကမ်းရိုးတန်းစောင့်တပ်ဖွဲ့၊ ရေတပ်နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့တွေအပါအ၀င် ကမ်းရိုးတန်းစောင့်တပ်က သင်္ဘော ၃၄ စီးနဲ့ ရေတပ်က ၂၅ စီး ပူးတွဲဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
မတော်တဆဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပါဘူး။ နစ်မြုပ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ မြူတွေ သိပ်သိပ်သည်းသည်း တညလုံး ကျနေလို့ ကျွန်းကို ကူးတဲ့ ခရီးသည်တင် ၀န်ဆောင်မှုအများအပြားကို ဖျက်သိမ်းထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
စက်ချို့ယွင်းနေသော ဆီတင် သင်္ဘောမှ တွန်းသင်္ဘောဖြင့် တွဲ၍ထွက်ခွာစဉ် နစ်မြုပ်
၁၆.၄.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၀၄၀၀ အချိန်တွင် ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ မြန်မာ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သီလ၀ါ ဆိပ်ကမ်းမှ ရန်ကုန်ဘက်သို့ ရေယာဉ်မောင်း ဦးစံသိန်းမောင်းနှင်လာသော ရွှေဗျိုင်းဖြူကုမ္ပဏိပိုင် သီဟကျော် အမည်ရှိ ဆီတင်တွဲအမှတ်(၄၇၁)တွန်းသင်္ဘောသည် ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ဗားကရာဈေးအနီး လှိုင်မြစ်ရေပြင်အရောက် စက်ချို့ယွင်းသွားသဖြင့်
(၀င်းပိုင်-၁)တွန်းသင်္ဘောကို ဆက်သွယ်ခေါ်ယူ၍ ၎င်းတွန်းသင်္ဘောဖြင့်
တွဲပြီး ဆက်လက်ထွက်ခွာစဉ် သီဟကျော်တွန်းသင်္ဘောမှာ ၀၄၂၀ အချိန်
တွင် အဆိုပါနေရာ၌ တိမ်းစောင်းနစ်မြုပ်သွားခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါနစ်မြုပ်သွားသောသင်္ဘောပေါ်တွင် ရေယာဉ်အမှုထမ်း(၆)ဦးပါရှိသည့်အနက် ရေယာဉ်မောင်း ဦးစံသိန်းနှင့် စက်ဆရာ ဦးသန်းအောင်တို့မှာ
ပျောက်ဆုံးနေသဖြင့် ဆိပ်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ရွှေဗျိုင်းဖြူ
ကုမ္ပဏီနှင့် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့တို့မှ ပူးပေါင်းရှာဖွေလျက်ရှိပြီး သင်္ဘောနစ်မြုပ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အမှုဖွင့်အရေးယူသွားရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်
လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိ ပါသည်။
သင်္ကြန်လည်ပတ်စဉ် လူစုကွဲကျန်ခဲ့ပြီး နေရပ်မပြန်တတ်သူ မိန်ကလေးအား ကူညီစောင့်ရှောက်ကာ အုပ်ထိန်းသူထံပြန်လည်အပ်နှံ
၁၅.၄.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၁၉၄၀ အချိန် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ မိသားစုရပ်ကွက်၊ ပန်းဆိုးတန်းဆိပ်ကမ်းရှိ ကျန်းမာရေးဗောတံတားကမ်းစပ်တွင် အပန်းဖြေ
နေသောAA-8557ပရိုဘောက်အဖြူရောင် အငှားယာဉ်မောင်း ဦးအေးမြင့်နှင့်
အဖွဲ့ထံသို့ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးရောက်ရှိလာပြီး ၎င်းသည် ကန်တော်ကြီး
တွင် သင်္ကြန်လည်နေရာမှ အဖော်များနှင့်လူစုကွဲသွားကာ ပန်းဆိုးတန်း
ဆိပ်ကမ်းသို့ ရောက်ရှိ လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ နေအိမ်သို့ပြန်ရန်အတွက် အကူအညီပေးပါရန် တောင်းခံလာသဖြင့် ဦးအေးမြင့်အဖွဲ့နှင့် လုံခြုံရေး
တာဝန်ကျ ရဲတပ်ကြပ် ကျော်တင်မောင်တို့မှ ဆိပ်ကမ်းမြို့မရဲစခန်းသို့ ပို့အပ်ကာ ကူညီစောင့်ရှောက်ထားရှိခဲ့ပါသည်။
၎င်းအမျိုးသမီးငယ်မှာ ဗာန်လာလ်ရှက်စ်(ခ)မခင်မိုးဆွေ (၁၈)နှစ်၊ အလှပြင်
ဆိုင်လုပ်ငန်း၊ (ဘ)ဦးရွှေကုန် ဖြစ်ပြီး ၁၅.၄.၂၀၁၄ရက်နေ့ ၁၇၀၀အချိန်
ခန့်တွင် သင်္ကြန်လည်စဉ် လူစုကွဲသွား ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်း၏အလှပြင်ဆိုင်
ဆရာမမှာဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ရတနာလမ်းနေ
စိစစ်ခဲ့ရာ မှန်ကန်ကြောင်းသိရှိရသည့်အတွက် ပြန်လည်အပ်နှံပေးနိုင်ရေး
ထိုသို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ၂၂၀၀အချိန်တွင် ဗာန်လာလ်ရှက်စ်(ခ)မခင်မိုးဆွေ အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် အလှပြင်ဆိုင်ဆရာမဖြစ်သူ ဒေါ်ပိုးဖြူဖြူစိုး၊ နန်းထိုက်အောင်အလှပြင်ဆိုင်၊ (ဘ)ဦးခင်စိုးမှ ရဲစခန်းသို့ လာရောက်
ခေါ်ဆောင်သဖြင့် ပြန်လည်အပ်နှံပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
အစ္စလာမ်မစ် စစ်သွေးကြွ ဘိုကိုဟာရမ် အဖွဲ့ (Credit: ABC)
နိုင်ဂျီးရီးယား ​နိုင်ငံ ​အရှေ့မြောက်ပိုင်းက ​မိန်းကလေးဘော်ဒါဆောင်တခုကို ​အစ္စလာမ်မစ် ​စစ်သွေးကြွတွေက ​၀င်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပြီး ​ကျောင်းသူ ​တစ်ရာကျော်ကို ​ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ ​သေနတ်သမားတွေဟာ ​ညသန်းခေါင်ယံအချိန်မှာ ​ဘော်ဒါဆောင်ကို ​ရောက်လာခဲ့ပြီး ​လော်ရီ ​ကုန်တင်ကား ​အပြင် ​ဘက်စ်စကား ​တစီးနဲ့ ​တောနက်ထဲကို ​မောင်းနှင် ​ခေါ်ဆောင် ​သွားခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ဂျီးရီးယား ​အရှေ့မြောက်ပိုင်းက ​ဘော်နိုပြည်နယ်ဟာ ​အစ္စလာမ်မစ် ​စစ်သွေးကြွတွေ ​ကြီးစိုးတဲ့ ​ဒေသဖြစ်ပါတယ်။
မော်တော်ယာဉ် ​စက်ချို့ယွင်းလို့ ​ကားနှေးသွားတဲ့ ​အချိန်မှာ ​ကျောင်းသူလေးတချို့ဟာ ​ကားပေါ်က ​ခုန်ချ ​ပြီး ​တောထဲမှာ ​ပုန်းခိုကာ ​မိုးလင်းတဲ့ ​အချိန်ကျမှ ​အိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်လို့ ​လွတ်မြောက်လာတဲ့ ​ကျောင်းသူတွေထဲက ​တယောက်က ​ပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
“ပန်းစကား” လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ လူငယ်အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ဟာ “လူသားအချင်းချင်း အမုန်းမပွားဖို့ ငါတို့နှုတ်ကို စောင့်စည်းစို့” ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်နဲ့ ဒီနေ့ သင်္ကြန်အကြတ်နေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့တွင်းက သင်္ကြန်ရေကစားမဏ္ဍပ်တွေကို လှည့်လည်ပြီး အမုန်းတရား မပြန့်ပွားရေးအတွက် နှိုးဆော်နေ ကြပါတယ်။
ဘာသာမတူ လူမျိုးမတူသူတွေအကြား တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ချစ်ခင်စွာဆက်ဆံပြောဆိုကြဖို့ကို တိုက်တွန်းတဲ့အနေနဲ့ ပန်းစကားလှုပ်ရှားမှုကို ပြုလုပ်ဖြစ်တာလို့ ပန်းစကား အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ ကိုနေဘုန်းလတ်က ပြော ပါတယ်။
“အင်တာနက်ပေါ်မှာရော အပြင်မှာရောပေ့ါနော်၊ Hate Speech လို့ခေါ်တဲ့ အမုန်းပွားစေတဲ့ စကားတွေရယ် Dangerous Speech လို့ခေါ်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိစေတဲ့ စကားတွေရယ်၊ အဲဒါတွေဟာ တော်တော်လေးကို များလာတယ်ပေါ့နော်၊ အဲဒီအတွက် လူ့အဖွဲ့အစည်းက ပြဿနာဖြစ်တာတွေများလာတော့ အဲဒါကိုစိုးရိမ်လို့ ကျနော်တို့က ပန်းစကာာ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးယူပြီးတော့ လှုပ်ရှားတာပေါ့နော်၊ ဒီလိုလှုံ့ဆော်မှုတွေကို လူငယ်တွေက အရမ်းကိုစိတ်ညစ်ပြီးတော့ စိတ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာကို ဒီပန်းစကားလှုပ်ရှားမှုက ပြလိုက်တာပဲ”
သင်္ကြန်ကား ၅ စီးလောက်နဲ့ လူငယ် ၅၀ လောက်ဟာ အင်္ကျီအနီရောင်ဆင်တူတွေ ၀တ်ဆင်ပြီး လှည့်လည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းစကားအဖွဲ့ဟာ မန္တလေး၊ ပဲခူး၊ ဒလ၊ သန်လျင်၊ ပခုက္ကူ စတဲ့နယ်တွေမှာလည်း ဧပြီလ ၄ရက်နေ့ကစပြီး အလားတူ လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
လာမယ့် နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှာလည်း ရွှေတိဂုံဘုရားတောင်ဘက်မုဒ်မှာ အမုန်းတရားတွေ မပြန့်ပွားစေဖို့ ဆောင်ပုဒ်နဲ့ ဆုတောင်းပွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
‘ပန်းစကား’ အဖွဲ့လိုပဲ ‘ပုံပြင်ပြောသူများ’ လို့အမည်ပေးထားပြီး ကလေးငယ်တွေကို ပုံပြင်တွေ လိုက်ပြောပြတဲ့ Myanmar Story Tellers အဖွဲ့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာရပ်တည်လာတာ ၄နှစ်ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့ ဘယ်လို ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲ၊ ဘယ်လိုပုံပြင်တွေကို ပြောပြသလဲဆိုတာ RFA သတင်းထောက် မဇင်မာဝင်း တင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ယုံကြည်ပေးပါ သမ္မတကြီး ——— တကယ်ကို ပြောင်းလဲနေပါပြီ။
(ဧရာဝတီရုံးကိုရောက်လာတဲ့ စာတစောင် ရှိပါတယ်။ ဒီစာကို ဦးသိန်းစိန် ဖတ်စေချင်တယ်လို့ စာ ယူဆောင်လာသူက ဆန္ဒရှိတဲ့အတွက် – သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်အတွက် စာတစောင် လို့ ခေါင်းစဉ် တပ်ပေးလိုက်ပါတယ်)